Runyerekupe Rutsigiro Rwunofunga Kuti Kuchave Nhatu Nhatu iPhone 7 Models | IPhone nhau
Runyerekupe rutsva runotsigira dzidziso yekuti kuchave nematatu iPhone 7 mamodheru: Zvakajairika, Plus uye Pro; 16GB inonyangarika
Chikumi 18 tinoburitsa mufananidzo (kuburikidza OnLeaks) izvo zvakaita kuti tifunge kuti gore rino mhando nhatu dze iPhone dzaizovhurwa. Pakutanga zvaifungidzirwa kuti chimwe chezvinhu zvitatu izvi zvaive prototype, asi mamwe midhiya akaburitsa fungidziro iPhone 7 mitengo uye ruzivo irworwo rwaisanganisira mutengo we iPhone 7 Pro, chishandiso chine zvemberi maficha izvo kusvikira munguva pfupi yapfuura zvaifungidzirwa kuve iyo Plus modhi.
Nhasi uno imwe runyerekupe yatanga kutenderera inova zvakare inovimbisa izvo pachave nemhando nhatu iPhone 7 nemitengo yeruzivo rutsva inoenderana neiya yakaburitswa muna Chikumi 24. Kune rimwe divi, irwo ruzivo rwekupedzisira kuoneka (ino nguva mu WeChat) inotiudzawo mune izvo zvinokwanisika iyo inotevera apple smartphone ichave iri uye paine nhau dzakanaka: iyo 16GB haicharatidzike (kunyangwe ndichifunga kuti ini ndatoona izvi ...).
Iyo iPhone 7 haichazove iri mu16GB
Mukudonha kwekutanga kwemitengo inofungidzirwa yeiyo iPhone 7 zvaive zvisina kujeka kuti kuchengeterwa kwaizogoverwa sei, ichiuya kuzoongorora mukana wekuti iyo 256GB yaingowanikwa chete muPro modhi. Maererano neruzivo rutsva, ese mamodheru achave ne chengetedzo imwechete kubva 32GB, 128GB uye 256GB.
Zvinoenderana nezvinotaurwa nerunyerekupe mwedzi uno, isu tichafanirwa kujairira pfungwa yekuti iyo iPhone 7 ichave diki diki pane zvaitarisirwa uye maviri emamodeli ayo achaunzwa munaGunyana achasvika aine masimba masimba / inoshanda processor uye kamera iri nani., iyo iPhone 7 Pro iri iyo modhi iyo ingave yakakosha. Ini pachangu, ini handione zvine musoro kuvhura maviri "matsva" michina ine mashoma mashoma maficha, saka ini ndichiri kufunga kuti kuchave chete iva mamodheru maviri: iyo 4.7-inch uye iyo 5.5-inch, kuva wechipiri iyo ichave iine Smart Kubatanidza uye Dual Kamera. Kana tikatarisa kuti iyo iPhone ye2017 ichasanganisira shanduko dzakakosha, chimwe chinhu chingave chine njodzi pakutengesa kwaApple. Ndeupi mufungo wako? Iwe unofunga kuti pachave nevaviri kana vatatu iPhone 7 mamodheru?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Runyerekupe rutsva runotsigira dzidziso yekuti kuchave nematatu iPhone 7 mamodheru: Zvakajairika, Plus uye Pro; 16GB inonyangarika
Zvingaite senge zvinondinyadzisa .. Kuve nekubhadhara zvakati wandei wepro modhi, ipapo iyo 7 ne7 yekuwedzera yaizounza iyo imwechete kamera .. Bone dhizaini yakafanana neyazvino uye pamusoro peiyo yavanoda kuitumidza i7? Haina pfungwa uye kana zvirizvo uye iwo mutengo makuhwa ari echokwadi, ndinofunga gore rino .. ndinoti kuonekana naApple! Ndinovimba anofungidzirwa pro .. Be the 7 plus, mutengo weiyo yazvino watowedzeredzwa, Apple iri kuchera guva rayo .. Gore rino iro razvino harina kumbove rakafanana nerakare uye gore rino .. Sezvo makuhwa ese anoitwa eChokwadi, zvinowedzera kutengesa kwako, iyo yekupedzisira ichokwadi setembere uye kwete runyerekupe.
Sezvenguva dzose, izvo zveApple zvinotiona isu zviso zvemapenzi uye zvechokwadi hazvina kukodzera chero munhu anozviteerera
Samsung kugadzira 40 mamirioni OLED mapaneru eApple